a 3.7 wmv vs MP4
Marka aad diyaar u habeen ah laakiin lahaa aad jecel yihiin inay daawadaan filimka ah, uma baahnid in aad si tayo leh u dhimayaan loogu talagalay. Sida dad badan ay suuqa cable TV-ga wuxuu ka tegey, content ciidammadu weyn ayaa ka soo baxay online. Meelaha ugu fiican si ay u daawadaan qeexitaanka sare (HD) filimada MP4 bixino khibrado geeyo joogto ah, waafaqsan yahay noocyada kala duwan qalab iyo nidaamyada hawlgalka, oo si fudud aad ku isticmaasho, sahlan in ay qaataan user interface.
Qaybta 1. The Best 10 HD Shabakadaha MP4 Movie
Mid ka mid ah iterations aan jeclaa oo ka mid ah goobaha movie MP4 HD, waxaan ku raaxaystaan ​​design iyo qaabka ugu watchmoviestream.com. Its shaqeynta la mid ah meelaha kale - waxa ay leedahay shaqo raadinta caalamka, oo ka kala Sooco ka filimada iyo filimada buuxa laba qaybood oo kala duwan. Movies Full ka mid ah isjiidka. Tayada guud ahaan waa mid aad u wanaagsan. Mareegtan ayaa soo bandhigaysa doorashada xoogan oo filimada Qaybta Dawlada. Taasi waa mid gaar ah, iyo khayraadka weyn dadka raadinaya filimada adag tahay inay helaan ama ka weyn. Qeybta ugu wanaagsan waa in filimada kuwani waa MP4 HD, si tayo leh ma u xanuunsado!
Movie ee bogga faahfaahsan siinayaa xog filimka, inta badan ka xirmo filimka la sii daayo, bog dib u eegista bulshada, iyo talooyin la xiriira filimada ku salaysan codsatay in file kasta tags. Waxaa intaa dheer, ka la socosho in-browser of filim laftiisa waa habka ugu fudud ee user a si ay u bilaabaan in ay MP4 HD waayo-aragnimo filim, ku gashid intii adigoo u wad iyada oo farabadan ee links ama waxaa laga yaabaa in aysan u horseedi karaan in ay content firfircoon.
Dadka ugu WatchMovieStream ayaa wax ku ool ah si dhaqso filimada cusub, maktabadda dhisidda la content. Ka dib markii daawashada ugu dambeeyay filimada MP4 HD, dhirtuba ku dhawaad ​​qaar ka mid ah ururinta dheeraad ah oo ku dhowba goobta ee.
"Watchmoviestream.com leeyahay ururinta aad u weyn ee filimada geeyo free domain dadweynaha si uu u daawado filimada sii daayo cusub free online sidoo kale." - TechReviewPro
"Xirmo A dhamaystiran kuwa doonaya in ay daawadaan filimada HD si sharci ah oo lacag la'aan ah." - Hacking-Guide.Com
2. irbad Movies
Movies IGLO, website la horumariyo, shirkadda ayaa sheegay in, la fududaato in la isticmaalo iyo deegaanka ad-free maanka ah. Siinta filimada cusub oo caan ah oo geeyo, IGLO waa browser xor ah oo internetka ku salaysan. Waxa aanu u baahan software ama app download - wax walba oo ka dhacaya browser web laftiisa.
Bogga hore waxay bixisaa thumbnails badan oo ka mid ah sawirada filimka marketing. Waxaa laga yaabaa inaad wax fikrad ah waxa aad rabto - IGLO Movies ayaa shaqo weyn raadinta aad u. Waxaa awood u leh inay page iyada oo filimada ku salaysan sano sii daayo ay. Bar navigation wuxuu kuu ogol yahay in la qodo galay sano back to 2013. Ama waxaad u baahan tahay caleenta ah ka hor inta aadan u degaan ah oo ku saabsan wax. In ay dhacdo, click ah mouse kor u furmay filimka ayaa faahfaahin bogga.
Faahfaahinta filimka ka mid ah wuxuu daaha ka tuurayeen, sifayn ee filimka, iyo IGLO ee rating. Waxaa suurtagal ah in si toos ah la wadaagto filimka ka this page, iyadoo la isticmaalayo inta badan dhufto ee warbaahinta bulshada. Si aad u aragto filimka, user fudud yeerto ee "Watch Movie Hadda" link oo la faray inay page play filimka ka.
IGLO muujinaysaa filimada ee HD, ilaa iyo inta aad computer ama qalab kale oo loo maqli taageertaa qeexitaanka sare.
"Daawashada filimada free online weligii si fudud." - TechReviewPro.Com
"IGLO waa website la yaab leh oo lacag la'aan ah halkaas oo aad ka daawan kartaa filimada aad jeceshahay online iyadoo aan wax lacag muddaba hal." - TechTricksClub
Alluc ee fiirin fududeeyey waa ka badan oo kaliya wajiga quruxsan. Alluc waa tallaabo hor inta badan ay tartan, diirada saaraysaa raadinta content saxda ah. Dadka siyaabo baabbi'iyee content beddeli doonaa, laakiin awood aad ku maamusho xogta weyn ku dhow sida ugu dhaqsaha badan ma beddeli doono.
Laga bilaabo bogga koowaad, user waa inay awoodaan inay ku qor ee keywords for search, isticmaali link menu ku yaal dhinaca midig sare si ay u helaan hawlaha quusin qoto dheer. Tusaale ahaan, baadi goobka ugu danbeeyay halkan ka muuqataa, oo sidaas sameeya fursad ay ku riix badhanka ah iyo inuu dib u Wakhtiga jir Alluc ah.
Bar raadinta ee dhexe ee shaashadda u ogolaataa user ay u galaan keywords iyo weedho si ay u helaan filimka ay doonayaan inay daawadaan. Dabcan, haddii aad leedahay horyaalka, kaliya galaya in u baadho waa ku filan oo ay aad hesho si aad video aad rabto. Laakiin aynu iska iloobin in aan horyaalka in mudo ah, laakiin waxaan ogahay waxa uu ahaa filim COP saaxiib ka 1994 Alluc kuu ogolaanaysaa inaad raadiso ah videos MP4 HD in ay yihiin tagged in weedha ah in ay fure u xawaare weyn iyo uptime joogta ah, oo nadiif ah oo si fudud loo isticmaali interface.
"Alluc waa mid ka mid ah goobta ku biiro si xor ah ugu caansan iyo da'da weyn kuu oggolaanaysa in aad daawato filimada iyo videos online lacag la'aan ah oo aan la soo degsado." -TechReviewPro
"Laakiin website-kan movie buuxa hubaal badbaadin doonto waqti iyo dadaal in la ogaado filimada online lacag la'aan ah si ay ugu raaxaystaan . "- VideoGrabber.Net
FreeFullMovies uu leeyahay qaabka ah in oo soo bandhigtay thumbnails koobab gaar ah oo caan ah. Thumbnails ay weli yihiin sawirrada movie laftiisa, taas oo isbedel nidaamsan oo u cusboonaysiinta.
Waxay bixisaa burburka macquul ah ee filimada uu heli karo by sano oo bixiya fursadaha Qoondayntani for dhirta. Goobta ayaa ahayd mid jirtay illaa 2008, waxaana uu leeyahay mid ka mid ah ka dib Adag internet-ka sababta oo ah videos tayo leh iyo in ay interface guud ahaan dareen leh.
Ka dib markii gujinaya thumbnail ah, user ayaa la qaadaa si bog faahfaahsan nadiif ah oo fudud. FreeFullMovies waa run in ay dalbanayaan in layers xayeysiis iyo furin aan idinku wareegsan raaci doonaa ay goobta. Ammaanka horumarinta maskax shirkadda go'aan ku gaaray in aan ka mid ah qashinka ka ay page. Tani waa go'aan-dhamaadka sare aad iyo talagalay dadka aan weligood daawaday ah movie MP4 HD ay computer ama qalab mobile, iyo sidoo kale dadka aadka u farsamo iyo daal ee nadaafadda web junk dib markii uu daawaday on qaar ka mid ah goobaha kale. Qof kasta oo si fudud oo dhaqso u bilaabi karaa FreeFullMovies, oo waxaa jira fursad kooban oo ah caabuqa ka dib markii ay soo degsado content.
Reviews: LAMA HELI KARO
A, Wolow Tube wax yar ka qabow iyo goobta funkier, laakiin weli nadiif ah oo si casri ah oo u fudud in ay maraan dadka isticmaala ku siinaysaa fursad ah in ay baaritaan database weyn ee filimada MP4 HD. Waxaa jira lacag la'aan ah si ay u sii qulquli video on Wolow, oo waxaa jira xad lahayn waxa aad qulquli karaan ama inta jeer. Dhab ahaantii, Wolow bixisaa dhibaatana aad u yar si ay u helaan jidka aad raadinta filimada MP4 HD aad habeenkii movie guriga! Xataa waxaad ka raadin kartaa iyo ciyaaro daafaca television muujinaysaa xaq loo siiyaa biraawsarkaaga. Ma jirto baahi loo soo dajiyo software khaas ah ama la socdo app ah. WolowTube waa mid aad u fududahay in la isticmaalo, iyadoo aan loo eegayn waxa madal aad ku jira, maxaa yeelay, waa gabal browser-horumariyo of software ah. Inkasta oo inta badan iibka ad marsiin tartamaya Wolow ayaa si ay u sii ganacsigooda, Wolow bartey maamushaa ay lacag caddaan ah la barwaaqaysan oo aan baahida loo qabo in xayeysiis pop-up looga xumaado oo carqalad.
"Waxa ay leeyihiin tayo geeyo filimada la yaab leh." - TechReviewPro
"WolowTube waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo goobaha geeyo filimada lacag la'aan ah ugu fudud." - Tricks Forum
JustMoviez waa aggregator HD movie MP4 ah. Waxaa baadhaa web ee filimada ugu danbeeyay oo caan ah. Dadka isticmaala kuwaas oo raba in ay ogaadaan si ay u daawadaan filimada online, oo aan lacag ah, JustMoviez waa meel fiican in ay sidaas samayso.
Qaabab kala duwan ayaa laga heli karaa, tan iyo 480p in filimada qeexitaanka sare, iyo user waa inay awoodaan inay doortaan nooca ay u sii qulquli in.
Iyada oo ka dul mid ka mid ah waraaqaha ay filim soo jiidasho sida thumbnails bogga hore ku siinayaa aragti deg deg ah filimka, gujinaya thumbnail ee film ku saabsan bogga hore ee JustMoviez aad qaadan doonaa bogga macluumaad ku saabsan horyaalka shaqsi ahaan. Waxa intaa dheer in xog horyaalka ah iyo rating, bogga faahfaahinta maqaal kaygan user ay u sii qulquli filimka. Links waxaa kasta si gaar ah u eegay marka la eego tayada, oo waxaa jira diiwaan ma loo baahan yahay si ay u soo daawadaan filimada MP4 HP on JustMoviez.
Ma aha oo kaliya horyaalka kasta bogga faahfaahsan leeyihiin qaybta ah IMDB-sida hoose, taas oo u fudud in ay wax ka bartaan kabka, laakiin waxa ay sidoo kale leedahay guddiga comments halkaas oo bulshada ka mid ah daawadayaasha wada iman karo ka keenay dunida oo dhan oo uu kala hadlo horyaalka ah .
"JustMoviez waa mid ka mid ah goobta geeyo filimada ugu fiican si ay u daawadaan filimka internetka aan duuban." - TechReviewPro
"site wuxuu bixiyaa Goobaha geeyo dhabta ah halkaas oo files filim lagu kaydin doonaa." - Tricks Forum
WatchSeries waa xayawaan yar ka duwan bogagga kale halkan dib loo eego. Waayo, mid wax, in kasta oo aanu marti qeexidda files MP4 sare, waxay noqon karaan filimada ama barnaamij taxane ah. Wixii kuwa jarida xundhurta in cable TV, WatchSeries waa meel fiican oo in la fiirsado. Kuwaas oo muujinaya caanka ah inta badan waxaa laga heli karaa adeegyada lacag laakiin sababta bixin goorta la heli karo si fudud oo dhaqso inay Kulanka Xiisaha Leh ee TubePlus, iyo marka aad la hubiyaa aad rabto in aad movie MP4 HD ama TV, waxa aad sameyn kartaa in maalgashiga?
Search on TubePlus waa heer sare, jidaynayey for keyword baaritaan. Celinta waa warbaahinta qallafsan, oo ay ku jiraan telefishanka iyo filimaanta.
Gujinaya thumbnail in ay galaan bogga faahfaahsan u ah television show filim ama HD MP4 siinayaa user interface ah mid aad u fiican. Author iyada oo dhacdooyin kala duwan oo taxane ah oo aan xanuun lahayn waa hoose ee shaashadda. Isjiidka yihiin xitaa diyaar u muujinaya telefishanka iyo filimaanta, iyo badhamada Play iyo Download waa mid aad u arki karo oo aan khaldin xayeysiis. Categorizations yihiin tag ku salaysan, taasoo ku siinaysaa marin loo helo isticmaalka badan oo kala duwan oo ku saabsan filimka iyo keeni kara in ay ka bar talooyinka weyn bidixda.
Lahaanshaha asal ahaan qaab-dhismeedka ka mid ah oo qurux badan, minimalist oo casri ah ka dhigaya websites ee noocani ma fududahay in la isticmaalo iyo wax fiican in aad waayo-aragnimo, FreeMoviesWatch waa boosteejo ah oo fiican oo heer sare leh maktabad yar ee filimada. Waxaa jira thumbnails bogga hore ogolaaday in qof xitaa iyada oo horyaal ee ugu caansan iyagoo aan ogeyn magacyadooda. Waxaa jira burburka wanaagsan ee filimada oo ay sanad ama ku sifayn. Sheegashada goobta ee warkiisa ku tahay awooddiisa ah inuu ku dar filimada ugu hadda si deg deg ah ugu. Haddii aad raadineyso weeyna il in uu yahay mid aad ugu sareysa ciyaarta ka kooban, ka dibna FreeMoviesWatch waa mid wanaagsan. Waxaad si fudud u daawan kartaa filimada MP4 HD halkan sida ugu dhakhsaha badan ay lagu sii daayo.
Waxaa jira waxyaabo dhawr in loo horumarin karo oo ku saabsan interface ka. Tusaale ahaan, mid ka mid hab-column in khariidad si fiican u shaqeeyaa qalabka qaar ka mid ah, laakiin sidoo kale hab ay ka jawaabaan goobta desktop waa jabay ama loo baahan yahay in hab dhaqaale badan oo miyirkiisu dhan yahay u isticmaala xitaa aan haysan si ay ugu rogto iyada oo tan oo screen hantida maguurtada ah si aad u hesho waxa ay raadineyso. Taas oo uu sheegay, madal u damiyaan links geeyo ee horyaalka movie ee ah bogga faahfaahsan ku xusan-the-laab, taas oo dalab inta badan goobaha movie geeyo MP4 HD aan bixiya.
"FreeMoviesWatch.com waa user aad u saarney saaxiibtinimo ee links movie ee si uu u daawado ee geeyo." - BestFreeStreamingHQ
A mid aad u fudud in ay baadhaan dhismeedka siinayaa isticmaala oo aan laga yaabaa in web-bixio hab lagu caleenta iyo filimada view si fudud oo dhaqso leh qalooca waxbarasho lahayn. The thumbnails filimo yihiin dhamaan qalabka marketing ka filimada, sidaa darteed dadka isticmaala waa in ay awoodaan in ay si fudud oo dhaqso loo ogaado filimka MP4 HD ay doonayaan inay daawadaan noqon.
Gujinaya mid ka mid ah thumbnails qaadataa user ay u filimka ee bogga faahfaahsan, sida caadiga ah. Bogga faahfaahsan Tani waa si buuxda uncluttered by xayeysiiska, taas oo lagu daray weyn. Waxa kale oo ay fududahay in la agagaarka hesho, mid button fudud oo oranaya "Watch Movie in HD" la. Xog kooban oo ka mid ah filimka, linkiyada filimada la xiriira (saaraa via tagging), isjiidka oo doorasho ah oo loogu talagalay dadka ee bulshada si ay u bixiyaan aragti filim jira oo dhan miiska ee iMovieTube.
". Waxay bixisaa dhammaan qaybaha filimada leh waayo-aragnimo HD kama dambaysta ah" - Tricks Forum
"iMovieTube ayaa ururinta ah yaab badan oo tiro badan oo filimada HD." - TechReviewPro
FreeStreamingMovies waa ilaha wanaagsan oo ku sii daayo ugu dambeeyay ee qaab filim MP4 HD. Goobta waa wada nadiifsan yahay, ay fududahay in la falgali, oo lagu daro thumbnails oo ka mid ah filimada ugu danbeeyay oo caan ah oo ay bixisaa on boggiisa hore. FreeStreamingMovies uu leeyahay shaqo fiican raadinaya, laakiin waxay bixisaa fursadaha dhirta category xadidan. Tani waxay noqon kartaa ka biyodiiday u isticmaala wax yaqaanna ay doonayaan inay daawadaan filimka sare oo tayo leh qaab MP4 HD, laakiin aanad hubin dhab ahaan waxa horyaalka ay doonayaan in ay eegaan.
Sida inta badan goobaha movie MP4 HD, gujinaya thumbnail ee horyaalka bogga hore qaadataa user bogga faahfaahsan oo ku saabsan filimka in si gaar ah. Marka ay dhacdo in FreeStreamingMovies, bogga faahfaahsan waxaa aad u buux xayeysiis. Waa maxay bogga hore uncluttered iyo fududeeyey jirsado galay daadsanaanta oo maaweeliya oo adag oo dhinaca faahfaahsan. Inkasta oo ay jiraan waa "damaanadqaaday Content" madax, waa perfunctory ee dareenka ah in dadka isticmaala yeelan doonaan dhib go'aaminta oo badhamada yihiin ad iyo kuwa badhamada shaqada si aad u eegto ama filimada MP4 HD. Users riixi kartaa mid link soo bixi filimka, oo la xidhiidha kala duwan si uu u daawado filimka HD MP4 ah, laakiin waxaa jira badhamada Seme Waayo, kuwaas oo falal in dhab ahaantii waa badhamada ad. Tani waxay keeni kartaa inay wareer ku saabsan qayb ka mid ah dadka isticmaala farsamo yar.
"Waxa ay heystaan ​​ururinta weyn ee filimada in ay database." -TechReviewPro
"Haddii aad raadinaya goobaha geeyo filimada free ugu fiican, FreeStreamingMovies.cc kaliya aad u." - Tricks Forum
Part2. Download MP4 Free la Wondershare AllMyTube
> Resource > MP4 > Top 10 MP4 HD Movies Shabakadaha